”မန်းရွှေစက်တော် ဘုရားဖူးများအတွက် ဝမ်းသာစရာ ပြင်ဆင်မှုများ” …. – May News
”မန်းရွှေစက်တော် ဘုရားဖူးများအတွက် ဝမ်းသာစရာ ပြင်ဆင်မှုများ” ….
မန်းရွှေစက်တော် ဘုရားဖူးများအတွက် ဝမ်းသာစရာ ပြင်ဆင်မှုများ . မန်းရွှေစက်တော် ဘုရားရဲ့ပြောင်းလဲမှုတွေ အားလုံးခံစားစေနိုင်ဖို့အတွက်မျှဝေတာပါ . နှစ်ပေါင်းများစွာကကြားခဲ့ရတဲ့။တည်းခိုဆောင်အခန်းဈေးကြီးတဲ့ကိစ္စ။
အရင်တုံးက ဈေးပြိုင်စံနစ်နဲ့ ။ဘုရားဂေါပကအဖွဲ့က လေလံပြစ်တယ်။‌ လေလံစွဲယူတဲ့ လုပ်ငန်းလုပ်သူတွေ အပြိုင်စွဲကြတော့ ဈေးတွေက အဆမတန်မြင့်သွားကြတော့။
သူတို့ကိုက်အောင် (အမြတ်အစွန်းရအောင်)‌ အခန်းခတွေဈေးတင် ။ အခန်းခက တွေဈေးကြီးတော့တာပေါ့။
အခုနှစ်တော့ အဲဒီ့ အခန်းခဈေးကြီးတာကို ကာကွယ်တဲ့ အနေနဲ့ လေလံစွဲမဲ့ သူတွေအားလုံး ကြမ်းခင်ဈေး သတ်မှတ်ချက်အတိုင်း မဲနှိုက်ပြီး ချပေးလိုက်ပါပြီ။ အခန်းခပိုမတောင်းဖို့လဲ ခိုင်မာတဲ့ဂတိကဝတ်တွေ။
ဒဏ်စံနစ်။ အရေးယူစံနစ်တွေနဲ့ ချပေးလိုက်ပါပြီ။ အခန်းခဈေးကိုလဲ ၁၅၀၀၀ ကျပ်ဈေးသတ်မှတ်လိုက်ပါပြီ။ အဲဒါကိုမှ ‌ဈေးပိုတောင်းရင်လဲ တိုက်ရိုက် တိုင်ကြားနိုင်တဲ့ ဖုံးနံပတ်တွေကိုလဲ။
အခန်းတွေမှာ။ဘုရားမှာ နဲ့ နေရာအစုံမှာ ကြေငြာထားလိုက်ပါပြီ။နောက်တခုက ရာဇဝတ်မှုတွေ။ ပြသနာတွေ။ ခွင့်ပြုမထားတာတွေ မကျုးလွန်နိုင်စေဖို့ကိုလဲ CCTV ကင်မရာ ၅၀ ကျော်ကို ဘုရားနဲ့ ပွဲဈေးက နေရာအနှံမှာတပ်စဉ်နေပါပြီ။
နောက်ထပ်တခုကလဲ နေရာအနှံမှာ တောင်းရမ်းစားသောက် နေသူတွေကိုလဲ။ စတင်ဖယ်ရှားဖို့ စီစဉ်နေပါပြီ။ အသက်ကြီးတဲ့ တောင်းရမ်းသူ‌တွေကိုတော့ ဘိုးဘွားရိပ်သာပို့မှာပါ။နောက်ဆုံးတခုကတော့ ဘုရား။အောက်စက်တော်ရာ။အထက်စက်တော်ရာ နေရာတွေမှာ အသံချဲ့စက် လော်စပီကာ အသုံးပြုခွင့်လုံးဝခွင့် မပြုတော့တာပါပဲ။
လုပ်တဲ့သူက တော့ရဲရဲဝင့်ဝင့် ဆောင်ရွက်နေပါပြီ။ အများက လိုက်နာကြမယ်ဆိုရင် လှပတဲ့ပြောင်းလဲမှု အသစ်ကို အားလုံးခံစားရမှာပါ။
Source – Min Nyo FB
မန်းရွှေစက်တော် ဘုရားဖူးမ်ားအတြက် ဝမ်းသာစရျာပင္ဆင္မှုမ်ား . မန်းရွှေစက်တော် ဘုရားရဲ့ျေပာင်းလဲမှုတြေ အားလုံးခံစားစေနိုင္ဖို့အတြက္မ်ွဝေတာပါ . နွစ်ပေါင်းမ်ားစြာကကြားခဲ့ရတဲ့။တည်းခိုဆောင်အခန်းဈေးကြီးတဲ့ကိစ္စ။
အရင္တုံးက ဈေးပြိုင္စံနစ္နဲ့ ။ဘုရားဂေါပကအဖြဲ့က လေလျံပစ္တယ်။‌ လေလံစြဲယူတဲ့ လုပ်ငန်းလုပ်သူတြေ အပြိုင္စြဲကြေတာ့ ဈေးတြေက အဆမတန်ျမင့်သြားကြေတာ့။ သူတို့ကိုက်အောင် (အျမတ်အစြန်းရေအာင်)‌ အခန်းခေတြေဈးတင် ။ အခန်းခက တြေဈးကြီးတော့တာပေါ့။
အခုနွစ်တော့ အဲဒီ့ အခန်းခေဈးကြီးတာကို ကာကြယ္တဲ့ အေနနဲ့ လေလံစြဲမဲ့ သူတြေအားလုံး ကြမ်းခင်ဈေး သတ္မွတ္ခ်က်အတိုင်း မဲနှိုက်ပြီး ခ်ပေးလိုက္ပါပြီ။ အခန်းခပိုမေတာင်းဖို့လဲ ခိုင္မာတဲ့ဂတိကဝတ်တြေ။
ဒဏ္စံနစ်။ အေရးယူစံနစ်တြေနဲ့ ခ်ပေးလိုက္ပါပြီ။ အခန်းခေဈးကိုလဲ ၁၅၀၀၀ က်ပ်ဈေးသတ္မွတ္လိုက္ပါပြီ။ အဲဒါကိုမွ ‌ဈေးပိုတောင်းရင္လဲ တိုက်ရိုက် တိုင်ကြားနိုင္တဲ့ ဖုံးနံပတ်တြေကိုလဲ။အခန်းတြေမွာ။ဘုရားမွာ နဲ့ နေရာအစုံမွာ ကျြေငာထားလိုက္ပါပြီ။နောက္တခုက ရာဇဝတ္မှုတြေ။ျပသနာတြေ။ ခြင့်ျပုမထားတာတြေ မက်ုးလြန်နိုင်စေဖို့ကိုလဲ CCTV ကင္မရာ ၅၀ ကေ်္ကာို ဘုရားနဲ့ ပြဲဈေးက နေရာအနွံမွာတပ္စဉ်နေပါပြီ။
နောက္ထပ္တခုကလဲ နေရာအနွံမွာ တောင်းရမ်းစားသောက် နေသူတြေကိုလဲ။ စတင္ဖယ်ရွားဖို့ စီစဉ်နေပါပြီ။ အသက်ကြီးတဲ့ တောင်းရမ်းသူ‌တြေကိုတော့ ဘိုးဘြားရိပ်သာပို့မွာပါ။နောက္ဆုံးတခုကေတာ့ ဘုရား။အောက္စက်တော်ရာ။အထက္စက်တော်ရာ နေရာတြေမွာ အသံခ်ဲ့စက် လ္စောပီကာ အသုံျးပုခြင့္လုံးဝခြင့် မျပုတော့တာပါပဲ။
လုပ္တဲ့သူက တော့ရဲရဲဝင့်ဝင့် ဆောင်ရက်ြနေပါပြီ။ အမ်ားက လိုက္နာကြမယ္ဆိုရင် လွပတဲ့ျေပာင်းလဲမှု အသစ္ကို အားလုံးခံစားရမွာပါ။
”ကြေးပိဿာချိန် ၁၆၀၀၀ ရှိ” မြန်မာပြည်၏ တတိယအကြီးဆုံး ခေါင်းလောင်းကြီးကို ”ယနေ့ည” သွန်းလောင်းမည်….
သီလရှင် အပါး ၃၀၀၀ နဲ့ ကျောင်းတိုက်ပေါင်း ၄၀ ကို တစ်လ ၂ ခါ အလှူလုပ်တဲ့” မြန်မာပြည်က သူဌေးကြီးမိသားစု”…
ပြီးခဲ့တဲ့ အပတ်တုန်းက သူ့ကို အတင်းဆွဲတဲ့ အမျိုးသမီးတဦးလက်ကို ပုတ်ထုတ် ဖယ်ရှားခဲ့တဲ့ ပုပ်ရဟန်းမင်းကြီး ဖရန့်စစ်ဟာ ဇန်နဝါရီလ ၈ ရက်နေ့ကသူ့ကို နမ်းမလားမေးတဲ့ သီလရှင်တဦးကို ဖက်နမ်းခဲ့ပါတယ်။ အပတ်စဉ် လူထုပရိသတ် နဲ့တွေ့ဆုံပွဲတစ်ခု မှာ ဖြစ်သွားခဲ့တာဖြစ်ပြီး သီလရှင် အမျိုးသမီးက အီတလီလို “Bacio, Papa!” (အနမ်းပေးပါ။ ပုပ်ရဟန်းမင်းကြီး) လို့ ပြောခဲ့တာပါ။ ပွီးခဲ့တဲ့ အပတျတုနျးက သူ့ကို အတငျးဆှဲတဲ့ အမြိုးသမီးတဦးလကျကို ပုတျထုတျ ဖယျရှားခဲ့တဲ့ ပုပျရဟနျးမငျးကွီး ဖရနျ့စဈဟာ ဇနျနဝါရီလ ၈ ရကျနကေ့သူ့ကို နမျးမလားမေးတဲ့ သီလရှငျတဦးကို ဖကျနမျးခဲ့ပါတယျ။ အပတျစဉျ လူထုပရိသတျ နဲ့တှဆေုံ့ပှဲတဈခု မှာ ဖွဈသှားခဲ့တာဖွဈပွီး သီလရှငျ အမြိုးသမီးက အီတလီလို “Bacio, Papa!” (အနမျးပေးပါ။ […]
မရှိလို့ မလှူ မလှူလို့မရှိ ဆိုသလို အလှူအတန်းမှာတော့ ရွှေမြန်မာတွေကတော့ ကမ္ဘာ့နံပါတ် တစ်ပဲ ဖြစ်ပါတယ်…ခုလည်းပဲ သူဌေးကြီးတစ်ဦးရဲ့ သာဓုခေါ်ဖွယ်အလှူတစ်ခုကို ပရိသတ်ကြီးတို့ ဝမ်းသာရအောင် ပြန်လည်မျှဝေပေးလိုက်ပါတယ်…. အဲတာကတော့ သာသနာ့နွယ်ဝင်သီလရှင်တွေကို သီဟသုဓမ္မမဏိဇောတဓရ ဦးအောင်သန်းစိန်နဲ့ ဇနီး ဒေါ်အေးမြင့်သန်း သမီး မစိုးစိုးသန်း မိသားစုတို့ကနေပြီး တစ်လကို သီလရှင်လေးတွေအတွက် ၁၀၀၀ တန်က အရွက် ၂၅၀၀ … ၅၀၀၀ တန်ကအရွက် ၅၀၀ ..ပေါင်း ..အရွက်ရေ ၃၀၀၀ …၁၀၀၀ တန် ၅ ရွက်လျှင် ၅၀၀၀ တန်တစ်ရွက်ညှပ် … အားလုံးအပါး ၃၀၀၀ ခန့်ကို တစ်ပြိုင်ထဲလှူဒါန်းပါတယ်…. ဒီလို အပါး ၃၀၀၀ ကျော်ကို လှူသူ ၁၈ ယောက်ခွဲလှူရင် ၁၀ […]